Ngingathola amasampula wamahhala?
Yebo, igceke eli-1 LEZIMPENDULO ZAMAHHALA liyatholakala, sikwazisa ukuqonda kwakho ukuthi imali yokuthwala impahla izolandwa.
Unayo i-MOQ yombala oboniswe kusixhumanisi?
Ayikho i-MOQ yezinto ezijwayelekile ezitholakala kusitoko, unga-oda ngamanani owacelile. Okokusebenza kombala okwenziwe ngokwezifiso kuzoba nama-MOQ wamagceke angama-300.
Izinto zesitoko ezijwayelekile ziyathunyelwa zingakapheli izinsuku ezintathu ngemuva kokukhokha. Yesikhathi esisha sokuhola yizinsuku eziyi-15-20 ngemuva kokuthola idiphozi engu-30%. Ngomdlalo owenziwe ngokwezifiso wombala wezinsuku ezingu-7 nezinsuku ezingama-20 zokuhola.
Sinjani isikhathi sokuphila sesikhumba noma sendwangu?
Okwesikhumba sokwenziwa yinto ecekelwa phansi ye-Eco futhi ingahlala iminyaka eyi-3-5 ezimweni ezinhle njengokuhlala ngaphandle ekushiseni okuphezulu nasendaweni ephakeme yomswakama. Ngesikhumba se-microfiber isikhathi sempilo singahlala iminyaka engaphezu kwengu-10.
Ngicela ikhathalogi yakho?
Ngenxa yemikhiqizo ehlukahlukene, sicela usazise izidingo zakho ezinembile ukuze sikwazi ukukufanela.
Singaba nelogo yethu noma ukuthungwa kwezilwane esikhunjeni?
Sicela uxhumane nathi ukuthola eminye imininingwane.
Singaqinisekisa kanjani ikhwalithi?
Njalo isampula yangaphambi kokukhiqiza ngaphambi kokukhiqizwa ngobuningi.
Ukuhlolwa kokugcina njalo ngaphambi kokuthunyelwa.
Kungani kufanele uthenge kithi hhayi kwabanye abahlinzeki?
Sisebenza ngokukhethekile ekuthuthukiseni, ekukhiqizeni nasekukhangiseni i-PVC / PU / Semi PU / Isikhumba se-Bonded / Microfiber lesikhumba. Ngaphandle kwentengo yokuncintisana emakethe eqinile, imibala ehlukahlukene nemiklamo yemfashini iyatholakala, futhi izimfanelo zizinzile kakhulu.
Angiyiboni imigqa nemibala engiyifunayo kuwebhusayithi yakho. Yini okufanele uyenze ngayo?
Sicela uthumele amasampula akho ekhelini lethu, bese singaba nobufakazi obukhethekile bakho ngokufanele. I-R & D Lab yethu inamakhemikhali anekhono kakhulu, ochwepheshe bombala nabachwepheshe bokuthuthukiswa komkhiqizo abangakha imikhiqizo yangokwezifiso ehlangabezana nokucaciswa kwakho ngqo.
Yiliphi igama lokukhokha lenkampani yakho?
Isikhathi sokukhokha samakhasimende amasha yi-T / T 30% idiphozi nebhalansi ngaphambi kokuthunyelwa noma i-L / C lapho sibona.Singaxoxa ngethenda elingcono lokukhokha ngemuva kwama-oda amaningi ngokubambisana okuhle.